Tsamba template: kukumbira kudzoreredzwa kwehunyanzvi mari
Yakatumirwa ne Tranquillus | Dec 17, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Tsamba uye yemahara modhi tsamba yekudzoreredza yako yehunyanzvi mari. Dzese dzinoshandisa kumisheni iri yako. Nezve izvo zvinodiwa uye zviitiko zve rako bhizinesi ibasa rake. Mutemo wezvevashandi unopa, kungave pakuratidzira magwaro anotsigira kana muchimiro chemari yakatarwa, kuti uchadzoserwa pamari dzawakakwira. Nekudaro, maitiro ekurapa anogona dzimwe nguva kuve anorwadza uye kutora nguva. Saka zviri kwauri kuti uzvirongedze uye uve nechokwadi chekuti unowana mari yako. Pane mukana mushoma wekuti vamwe vachanetsekana nazvo nezvako.
Ndeapi marudzi akasiyana ebhizimusi mari?
Mukati mebasa rako, unogona nguva nenguva kuve pasi pemari yehunyanzvi. Izvi ndizvo zvinodikanwa zvemubhadharo zvaunofanirwa kufambira mberi panguva yekuita kwako mabasa uye izvo zvakabatana nekuita kwako chiitiko. Mazhinji emishumo yemubhadharo ibasa rekambani.
Izvo zvinonzi mari yehunyanzvi inogona kutora akasiyana maficha, akakosha pane ayo ari:
Mari yekufambisa: kana uchifamba nendege, chitima, bhazi kana tekisi kune mamishinari kana kuenda kumusangano wehunyanzvi;
Mileage mutengo: kana mushandi akashandisa yake mota rwendo rwebhizinesi (rwakaverengerwa nemiyero yemireji kana husiku hotera)
Mari dzekudyira: pamabhinnisheni emabhizinesi;
Unyanzvi hwekufambisa mari: yakabatana neshanduko yechinzvimbo inotungamira kuchinzvimbo munzvimbo yekugara.
Iko kune zvakare:
Mari dzekutengesa runhare,
Izvo zvinodhura zvekushandisa ICT maturusi (ruzivo rutsva uye kutaurirana matekinoroji),
VERENGA Kunyora mushe, hunyanzvi hunokosha!
Kubhadharwa kwemari yehunyanzvi kunoitwa sei?
Chero zvingave zvakaita mari yemubhadharo, zvirevo nemamiriro ekudzoserwa kwemari zvinogona kutora mafomu maviri. Zvichida izvo zvinopihwa muchibvumirano chebasa, kana zvine chekuita netsika mukambani.
Kubhadhara kunogona kuitwa nekudzosera yakananga yemitengo chaiyo, ndiko kuti zvese zvebhadharo zvakawanikwa. Izvi zvine chekuita nemari yekufona, kushandiswa kweITI maturusi, kufamba kwehunyanzvi, kana mari inoitiswa nevashandi vakatumirwa kunze kwenyika. Nekudaro, iye mushandi anoendesa mishumo yake dzakasiyana-siyana dzemubhadharo kune waanoshandira. Kuita chokwadi chekuzvichengeta kweanopfuura makore matatu.
Izvo zvakare zvinoita kuti iwe ubhadharwe imwe nguva kana nguva nenguva flat-rate indemnity. Iyi nzira inogamuchirwa yemitengo inodzokororwa, semuenzaniso, kune mutengesi. Mune ino kesi, iyo yekupedzisira haina kusungirwa kururamisa mari yake. Ceilings inoiswa neiyo mutero manejimendi uye inosiyana zvinoenderana nemhando yemitengo (chikafu, chekufambisa, pekugara kwenguva pfupi, kubvisa, mileage mvumo). Nekudaro, kana iyo miganhu ikapfuura, mushandirwi angangoda magwaro ako ekutsigira. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vatungamiriri vekambani havana mvumo kune iyi yakatarwa mvumo.
Maitiro ekukumbira kudzoserwa kwenyanzvi dzemari
Semutemo wenguva dzose, kudzoreredzwa kweyeako nyanzvi yemari inoshandiswa kunoitwa mushure mekutumirwa kwemagwaro anotsigira kudhipatimendi rekuverenga kana kumaneja wevashandi. Chiyero chinowanzoonekwa pane yako inotevera pay slip uye huwandu huchaendeswa kuaccount yako.
Une makore matatu aunogona kupa humbowo hwemashandisirwo ehunyanzvi uye nekudaro unodzoserwa. Kupfuura nguva ino, mukuru wako haasungirwe kuvabhadhara. Kana nekutadza kana kukanganwa kana chero chikonzero, yako mari haina kudzorerwa kwauri. Zviri nani chaizvo kupindira nekukurumidza nekutumira tsamba inokumbira kubhadharwa kukambani yako.
Kuti ikubatsire, heano maenzaniso maviri etsamba ekuita chikumbiro chako. Chero nzira. Pamusoro pazvose, ive shuwa yekubatanidza magwaro ekutanga anotsigira uye chengeta makopi ako wega.
Muenzaniso wetsamba yechikumbiro chakajairwa chekudzoreredza mari yehunyanzvi
Zita rekupedzisira Zita rekutanga mushandi
Kambani… (Kambani zita)
(Guta), pa ... (Zuva),
Musoro: Chikumbiro chekudzoreredzwa kwehunyanzvi mari
Kutevera ndyiko dzakawanikwa mukati menguva dzangu dzekupedzisira. Uye zvino ndichishuvira kubatsirwa kubva pakudzoserwa kwenyanzvi dzangu dzemari. Ndiri kukutumira izvozvi runyorwa ruzere rwemabhadharo angu maererano nemaitiro.
Saka ndakaita rwendo kubva ku _____ (nzvimbo yekuenda) kuenda ku _____ (nzvimbo yekuenda rwendo rwebhizinesi) kubva ku ________ kusvika ku _____ (zuva rekufamba) kuenda kumisangano yakakosha yekusimudzira kambani yedu. Ndakaenda nendege imomo ndokudzoka mukati merwendo rwangu ndokukwira michovha yakati wandei.
Pamusoro peizvi zvemubhadharo, mari yangu yekugara muhotera uye mari yangu yekudya inowedzerwa. Kutsigira magwaro anopupurira kune yangu ese mipiro akaiswa kune ichi chikumbiro.
Kumirira mhinduro yakanaka kubva kwauri, ndinokukumbira kuti ugamuchire, Changamire, kwaziso dzangu dzinoremekedzwa.
Muenzaniso wetsamba iri kukumbira kubhadharirwa mari yehunyanzvi mune zvekuramba nemushandirwi
Musoro: Chikumbiro chekudzoserwa kwehunyanzvi mari
Sechikamu chebasa rangu, ndakafanirwa kuita nzendo dzinoverengeka dzebhizinesi kunze kwenyika. Se [mushandi] mushandi, ndakaenda ku [kuenda] kwemazuva mana kumabasa chaiwo ane chekuita nenzvimbo yangu.
Nemvumo yemaneja maneja wangu, ndakafamba neyangu mota. Ndakafamba makiromita [nhamba] akazara. Kune izvi zvinowedzerwa mutengo wezvokudya uye husiku hwakati wandei pahotera, pamutengo wakazara we [huwandu] mayuro.
Iwo mutemo unotaura kuti izvi zvehunyanzvi mari dzinofanirwa kutakurwa nekambani. Nekudaro, kunyangwe paine magwaro ese anodiwa akapihwa kune dhipatimendi rezve accounting pakudzoka kwangu, ini handisati ndagamuchira iyo mubhadharo wakanangana kusvika zvino.
Ichi ndicho chikonzero nei ndichikukumbira kuti upindire kuitira kuti ndikwanise kudzoserwa nekukurumidza. Iwe unowana wakanamatira kopi yeese ma invoice ayo anopembedza chikumbiro changu.
Ndichiri kukutendai pamberi nerubatsiro rwenyu, ndinokumbira kuti mutende, VaMutungamiriri, kuvimbiswa kwekufungisisa kwangu kukuru.
Dhawunirodha "Sampuli-tsamba-ye-yakajairwa-kukumbira-yekubhadharira-kwe-nyanzvi-mari.docx"	Semuenzaniso-wetsamba-ye-yakajairwa-kukumbira-yekubhadharira-kwe-nyanzvi-mari.docx - Yakadzoswa ka4598 times - 21 Kb
VERENGA Zviri nani kutumira maemail kana kuti tsamba?
Dhawunirodha "Sampuli-tsamba-yekubhadharira-ye-nyanzvi-mari-mune-kesi-yekuramba-kubva-kune-mushandirapamwe.docx"	Semuenzaniso-wetsamba-ye-iyo-iyo-yekumbiro-yekubhadharira-ye-nyanzvi-mari-mune-kesi-yekuramba-kubva-kune-iye mushandirwi.docx - Yakadzoswa ka4571 nguva - 13 Kb
Tsamba template: kukumbira kudzoreredzwa kwehunyanzvi mari January 8th, 2022Tranquillus
pashureNdine mvumo here yekumisa kubvunzurudza kwehunyanzvi kune gore ra2021 ndisina kurangwa?
zvinoteveraMahoridhe uye mazuva ekuzorora: mukana wekumisikidza nekugadzirisa mazuva avo kusvika June 30, 2021
Template email kuti ipindure kune chikumbiro chekutsvaga kubva kumutariri
Tsamba template kukumbira kumberi kana dhipoziti